विदेशीलाई थप १४ दिन इन्डोनेसिया प्रवेश निषेध
जकार्ता : विदेशी नागरिकलाई इन्डोनेसिया प्रवेशका लागि सोमबारदेखि थप १४ दिन निषेध गरिएको छ । कोरोना भाइरस महामारी थप फैलिने डरले विदेशी नागरिकलाई थप २ हप्ता प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । यसअघि लामो समयदेखि लगाइँदै आएको प्रतिबन्धलाई थप २ हप्ता निरन्तरता दिने निर्णय भएको मन्त्री एयरलाङ्गा हार्तार्तोले जानकारी दिए ।
सरकारले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरुलाई अहिले थप कडाइका साथ लागू गर्न लागेको पनि उनले बताए । राष्ट्रपति जोको विडोडोले पनि विदेशी नागरिकलाई इन्डोनेसिया प्रवेशका लागि प्रतिबन्ध लगाउने समय बढाउने निर्णयप्रति समर्थन जनाएका छन् । सरकारको यो निर्णयसँगै यही जनवरी २८ तारिखसम्म विदेशी नागरिकले इन्डोनेसिया प्रवेश नपाउने भएका छन् ।
इन्डोनेसियाली सरकारले यसअघि पनि यही जनवरी १ देखि १४ सम्म विदेशी नागरिकलाई प्रवेश निषेध गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको थियो । विदेशी सरकारी उच्च अधिकारी तथा अति महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुलाई पनि आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेर सरकारको स्वीकृतिमा भ्रमणको व्यवस्था भने गर्न सकिने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
मानुषी लघुवित्तको आइपीओ नेप्सेमा सूचीकृत, ओपनिङ रेन्ज कति ?
नाडाको ४५औं वार्षिक साधारण सभा र निर्वाचन मसिंरमा हुने
संसारका सबैभन्दा ठूला ६ स्टक मार्केट, कसको बजार पुँजीकरण कति ?
पुँजी बजारका धेरै मुद्दा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने, समन्वयमा धितोपत्र बोर्ड